China 1,2-diaminobenzene CAS: 95-54-5 vagadziri uye vanotengesa | Kuzvipira
Chinhu Mira Mhedzisiro
Chitarisiko Chiedza brown brown pasa
Kunyauka Nzvimbo ℃ ≥ 100 100.92
Munhu akaidza% ≥ 99 99.98
O-Nitroaniline% ≤ 0.1 Haisati yaonekwa
M-Phenylenediamine% ≤ 0.01 Haisati yaonekwa
o-Phenylenediamine ine mamwe anoshanda emakemikari zvivakwa. Inogona kukanganiswa nemaacid, aldehydes, ketoni uye mamwe macomputer ekuwana heterocyclic compounds. Iyo inogona zvakare kuita oxidation, polycondensation, kutsiva, uye diazotization maitiro.
Chiyero chekushandisa cheo-phenylenediamine chingangoita 70% yezvipembenene zvemushonga, 10% yezvirimwa zvinowedzerwa, 5% zvemishonga, uye 15% kune dzimwe nzvimbo. Muindasitiri yezvipembenene, o-phenylenediamine inonyanya kushandiswa kugadzira benzimidazoles. Fungicides, senge carbendazim, thiophanate, mebendazole, nezvimwewo, uye izvo zvine benzimidazole mhete yakarongedzwa zvava nhungamiro yekutsvaga nekusimudzira kweye fungicides nyowani. Iyo inomiririra chigadzirwa chakakura-chakasarudzika uye chepamusoro-kugona systemic carbendazim; iyo benzimidazole michina yakatorwa kubva kune o-phenylenediamine haingoshandiswa chete kugadzira fungicides, asi zvakare inogona kudzivirira kusvibiswa kwepurasitiki nekuvandudza resin simba. Muindasitiri yemishonga, o-phenylenediamine inogona kushandiswa kugadzira antipsychotic zvinodhaka. Pimoxifen, droperidol, histamine clemizole uye veterinary anthelmintic ese ari benzimidazole makomponi, ese ane o-phenylenediamine sezvinhu zvakagadzirwa. Rubha zvinowedzera, zvinonyanya kushandiswa mukugadzira rabha antioxidants MB uye MBZ, asi chiyero chekugadzira epamba hachina kukura. Mune zvimwewo zvinhu, benzotriazole inogona kushandiswa seye corrosion inhibitor, yekumisikidza mumiriri, photosensitive zvinhu uye analytical reagent. Gore rino, kudiwa kweo-phenylenediamine, kunyanya yemhando yepamusoro chena o-phenylenediamine, yakawedzera nekukurumidza, uye huwandu hwekunze hwakawedzera gore negore.
Kushandisa: 1,2-diaminobenzene iri yepakati madhayi, mishonga yekuuraya zvipuka, zvinowedzera, photosensitive zvinhu, nezvimwewo. Iyo ndiyo dyestuff yeyero shava M. Inoshandiswa mukugadzira polyamide, polyurethane, bactericides carbendazim uye thiophanate, ichidzikisa tsvuku GG, leveling mumiririri, antioxidant MB, uye zvakare inoshandiswa mukugadzirira kweanogadzira, anoshanda nesimba, nezvimwe.
Kavha Detail: 25kg / kadhibhodhi dhiramu
Bata: Shijiazhuang Anotendeseka Chemicals Co., Ltd.
Alice Wang (Mumiriri weBhizinesi)
Zvadaro: N, N-dimethylbenzylamine
Pesticide Pakati Pakati Methylpiperidine
Adress: Jinling Dzimba Nha. 106-1 East Yuhua Rd., Shijiazhuang, Hebei, China